QM oo Kenya kala hadashay xiisada kala dhexeeya Soomaaliya - Awdinle Online
QM oo Kenya kala hadashay xiisada kala dhexeeya Soomaaliya
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan ayaa waxaa uu kulan la qaatay Wasiirka arrimaha dibada Kenya Amb. Raychelle Omamo, kaas oo looga hadlay Arrimo ay kamid yihiin xaalada dalka Soomaaliya.
Kulanka oo ku qabsoomay aallada fogaanka araga ee ( Video Confrenc) ayaa waxaa ay labada mas’uul uga hadleen amniga iyo ilaalinya Nabadda ee wadamada Gobolka Geeska Afrika.
Warbaahinta Kenya ayaa shaacisay in Wakiilka Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya Amb, James Swan uu sheegay inay Kenya diyaar u tahay inay dejiso xiisada sii kordheysa ee kala dhaxeeya dalka deriska la ah ee Soomaaliya.
“ Dowladda Kenya waxaa ay muujisay inay diyaar u tahay ilaalinta iyo dejinta xiisada sii kordheysa ee kala dhaxeysa Soomaaliya, maadaama labada dowladood ay yihiin kuwo ku yaalla Geeska Afrika ayuu yiri” Amb, James Swan.
Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa aad u xumaa xiriirka dowladaha Soomaaliya & Kenya, taas oo keentay in dowladda Soomaaliya ay joojiso jaadkii (qaadkii) ka imaan jiray Kenya, iyada oo dhowr jeer ku eedeysay inay faragelin ku heyso Arrimaha Soomaaliya.
Previous articleDil ka dhacay Magaalada laas-Caanood & faah faahin laga helayo
Next articleFarmaajo oo Warqadaha Aqoonsiga ka Guddoomay Saddex Safiir